Vidio ny vovony Tadalafil (171596-29-5) -Manufacturer & orinasa
Rating: SKU: 171596-29-5. Sokajy: Hormonal Enhancing Sex
Ny tsiranoka Tadalafil, ny fitaovan'ny tadalafil, dia karazana fotsy fotsy, matetika no ampiasaina mba hahazoana fanafody tadalafil. Ny fanafody Tadalafil, izay antsoina hoe / Cialis, dia iray amin'ireo kilasy misy fanafody fantatra amin'ny anarana hoe PDE-5 (Phosphodiesterase type 5).
Ny AASraw dia miaraka amin'ny synthesis sy ny fahaiza-manao manomboka amin'ny gram mankany amin'ny lamina maromaro (Rav Tadalafil (Levitra Cialis) (171596-29-5), eo ambany fanaraha-maso CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Raw Tadalafil vovoka (Video levitra)
Levitra tadalafil (Levitra cialis) ireo karazana fototra
Name: Tadalafila (Levitra cialis)
Meny fitetezana 389.4
1.AASraw dia manome vovony Raw Tadalafil (Levitra Cialis), izay afaka'Tadiavin'ny ankamaroan'ny fomba iombonana.
Ny 2.AASraw dia manome fomba sy toro-hevitra vitsivitsy amin'ny famokarana ho an'ny entana tsy fantatra (Taratasy Cialis) Taratasy Tadalafil.
Inona no atao hoe poids Tadalafil
Ny vovobony Tadalafil, ny akora tadalafil, dia karazana vovoka fotsy, mazàna ampiasaina hanamboarana pilina tadalafil. Ny fanafody Tadalafil, antsoina hoe / Cialis, dia iray amin'ireo kilasy fanafody fantatra amin'ny anarana hoe PDE-5 (Phosphodiesterase type 5). Ny fanatsarana ny firaisana ara-nofo Tadalafil / Cialis dia mampihena ny hozatry ny lalan-dra ary mampitombo ny fikorianan'ny rà amin'ny faritra manokana amin'ny vatana. Tadalafil / Cialis ary ireo mpanakana PDE-5 hafa dia afaka manampy ny lehilahy amin'ny erectile (ED) amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny valin'ny erectile rehefa misy lehilahy manentana ny lahy sy ny vavy. Izy io dia ampiasaina hitsaboana ny tsy fetezan'ny erectile (tsy fahampian-tsakafo) sy ny soritr'aretin'ny hypertrophy prostatic benign (prostate lehibe). Matetika ny olona dia mividy vovoka tadalafil amin'ny mpamatsy vovoka tadalafil madio madio. Ankoatra ny Tadalafil / Cialis, ny fanafody hafa amin'ity kilasy ity dia Viagra (Sildenafil) sy Levitra (Vardenafil), ary Flibanserin.
Ahoana ny fiasan'ny tadalafil
Ny PDE5 dia angomanga hita ao amin'ny ankamaroan'ny lehilahy mijaly noho ny dysfunction erectile. Manala tsiranoka hafa tena manan-danja izy io - cGMP, na cyanika monophosphate guanosine, izay singa manan-danja amin'ny dingan'ny fikarakarana ara-pahasalamana. Misaotra ny cGMP ny famantarana avy amin'ny fiafaran'aretina ao amin'ny faritra misy anao dia mamoaka ny famoahana ny oksika oksika, izay mahatonga azy ho tony tsara kokoa ny hozatra marefo amin'ny fantson-dra ao anaty valizy. Vokatr'izany dia mihabetsaka kokoa ny rà mandalo, mameno ny rafitra lava ao amin'ny vatan'ny penis anao, ka mahatonga azy ho sarotra sy ho voaro. Raha betsaka loatra ny PDE5 ary tsy ampy ny cGMP, ny vatanao dia tsy afaka mamafa fotsiny ireo famantarana avy amin'ny fiafaràn'ny nerveo, izay mahatonga ny tsy fahafahana tanteraka na ny ampahany tsy hahazoana fananganana.
Rehefa mandray ny poezia Cialis / tadalafil 36 ora ianao dia mampihena kely ny vokatrin'ny PDE5 ao amin'ny rafitrao, ka mahatonga ny cGMP hiverina amin'ny sehatra mahazatra ao anatin'ny 15-45 minitra. Na izany aza, rehefa fohy ny antsasak'i Tadalafil dia fohy kely ny vokatra vokariny mandritra ny andro 2 izay hamerenana ny PDE5 sy ny fahasalamanao ara-nofo - miharatsy. Etsy ankilany, rehefa maka ny tavy Cialis / tadalafil isan'andro ianao dia manampy amin'ny fihazonana ny salasalan'ny cGMP ao amin'ny vatanao izany, ka hanome anao ny fotoana mety mbola hankafizana indray ny firaisana ara-nofo. Ilaina ny Cialis 4-5 andro ambany mba hanombohana ny asa, koa aza manantena ny hiverina ho tena macho taorian'ny nakana ny pilina voalohany. Na dia izany aza, ny ampahany tsara dia ny tsy hahatsapa ny fahasarotana rehetra any am-pandriana intsony - raha mbola mitohy isan'andro ny pilina Cialis / tadalafil.
Ahoana ny fomba hifehezana ny vovobony tadalafil
Ny tsiranoka tadalafil vita amin'ny tadalafila dia tonga amin'ny tsena amin'ny endrika pills tadalafil; capsules, Rehefa manapa-kevitra ny hitondra tadalafil ianao, dia tokony hanitsy ny dose araka izay ilainao.
Ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​ny tadalafil fanombohana voatokana dia 10 mg isanandro, matetika nalain'ny 30minutes alohan'ny fanaovana firaisana ara-nofo (tadalafil ampiasaina araka izay ilaina). Mety hiankina amin'ny 20 mg na ny fihenan'ny 5 mg isan'andro ny doka raha tsy mifanaraka amin'ny vokatry ny valiny na ny fiantraikany. Ny vokatry ny tadalafil dia mety maharitra hatramin'ny ora 36. Ny olona izay mandray fanafody mampitombo ny tahan'ny tadalafila dia tsy tokony hihoatra ny doka 10 mg amin'ny ora 72 (Jereo ny fifandraisana amin'ny zava-mahadomelina). Ho an'ny fampiasana isan'andro isan'andro tsy misy fijerena ny fanaovana firaisana ara-nofo dia ny dosie nomerika dia 2.5 amin'ny 5 mg isan'andro. Tadalafila dia tsy tokony haka mihoatra noho ny indray mandeha isan'andro.
Fanamarihana lehibe: Cialis dia tsy tokony horaisina amin'ny nitrates noho ny fahafahany mampihena ny tosidra. Ny Nitrates dia tsy tokony horaisina mandritra ny 48 ora farafahakeliny alohan'ny hampiasan'ny Cialis amin'ny ankamaroan'ny mpampiasa nitrate mila misoroka an'io sy ny PED5 rehetra.
Fampiharana vovoka Tadalafil amidy
Ao amin'ny fivarotam-panafody eo an-toerana, na any amin'ny hopitaly, dia afaka mahita mora foana ny cialis, izany hoe tadalafil. Eny, ity dia vovoka tadalafil - iray amin'ireo fampiharana mahazatra indrindra dia natao fanafody ho an'ny fitsaboana ED, matetika amin'ny endrika pilina na takelaka, ankoatr'izay, raha ny marina, ny tadalafil koa dia nampiasaina tamin'ny fotoana hafa, toy ny :
Vovobidy Tadalafil ho an'ny siramamy ara-nofo
Tadalafil dia azo ampiana amin'ny vatomamy mba hanaovana vatomamy mahazatra hanatsarana ny filan'ny lahy sy ny vavy. Betsaka ny karazana vatomamy mamy ao Malezia, ny akora fototra dia ny vovo-tadalafil, ary ny vovony sildenafil.
Taratasy Tadalafil ho an'ny kafe
Ao an-tsena, misy karazana kafe ara-tsimok'aretika.Mainly Ingredients dia matetika: Coconut Milk, Honey, Cinnamon, Cacao, Maca.Sex ny kafe dia karazana latabatra tranaona miaraka amin'ny Aztec tadika ho azy. Mahavariana kely ny tsirony, fa malefaka ampy mba hiantsoana ny tsirony. Ity kafe ara-pananahana ity dia manana ny fitaovana hanatsarana ny libido. Maca, Cacao, Zavamaniry, Honey sy Coconut Milk dia manampy amin'ny famolavolana ny famokarana hormonina, hanatsarana ny kalitaon'ny semen, ny fihenan'ny menopause, ny fihenan'ny siramamy avo, ny fanamafisana ny fitandroana ny fahadiovam-pitondrantena.
Ho anay, indraindray raha te hanana effets matanjaka kokoa na effets malemy kokoa isika dia afaka manao kafe firaisana ara-nofo amin'ny alàlan'ny fampidirana tadalafil volo manatsara ny firaisana ara-nofo, arakaraka ny filan'ny mpanjifa manao kafe isan-karazany.
Ahoana no hividianana vinaingitra Tadalafil; Buy Cialis powder from AASraw